ကိုယျပိုငျ Wordpress Website တဈခုကိုအခမဲ့ဘယျလိုဖနျတီးမလဲ - DailyInfo - Myanmar
WordPress.com platform ပျေါမှာအခမဲ့ website တဈခုကို ဘယျလိုဖနျတီးတညျဆောကျမလဲဆိုတာ တဈဆငျ့ပီး တဈဆငျ့ရှငျးပွသှားပါမယျ။
အဆငျ့ (၁) – WordPress.com မှာ WordPress အကောငျ့ဖှငျ့ရနျ
ကိုယျ့မှာရှိတဲ့ Browser မှာ www.wordpress.com ဆို ပီးရိုကျထညျ့ပါ။ အောကျပါပုံအတိုငျး ပျေါလာတဲ့အခါမှာ မွှားပွထားတဲ့ Get Started ကိုနှိပျလိုကျရငျ Sing up form ကလြာပါမယျ။
Form ထဲမှာ Email Address(အီးမေးလျလိပျစာ)၊ Username(အမညျ)၊ Password(လြှို့ဝှကျကုဒျ) ဖွညျ့ပါ။ အခကျြအားလုံးဖွညျ့ပီးသှားရငျ Create your account ကိုနှိပျပါ။
Domain ထညျ့ရနျ Form တဈခုကလြာပါမယျ။ အဲ့ထဲမှာ ကိုပွုလုပျမယျ့ Domain name (website နာမညျ) ထညျ့ရပါမယျ။
ဥပမာ – www.yourdoaminname.com (‘yourd‌omainname’ နရောမှာကွိုကျနှဈသကျရာ နာမညျထညျ့ပါ တခွား ရှိပီးသား domain name တှနေဲ့ မတူအောငျထညျ့ရပါမယျ)
ဤနရောမှာ ကနြျောတို့ သိထားသငျ့တာတဈခုရှိပါတယျ။ ကနြျောတို့က အခမဲ့ Website ဖနျတီးရနျ WordPress ကိုအသုံးပွုထားတာဖွဈတဲ့အတှကျကွောငျ့ ကနြျောတို့ရှေးခယျြတဲ့ Domain name အနောကျမှာ wordpress.com ဆိုပီးပျေါနမှောပါ။
ဥပမာ – www.yourdomainname.wordpress.com
Domain name ရှေးခယျြပီးပါက အောကျပါပုံအတိုငျး Free စာတနျးပါတဲ့ Select ကိုနှိပျပါ။
နောကျတဈပခြေျ့ မှာ အခမဲ့သုံးမလား၊ ပိုကျဆံပေးသုံးမလား ပွပါလိမျ့မယျ။ ကနြျောတို့က အခမဲ့အသုံးပွုခငျြတာကွောငျ့ Start withafree ကိုနှိပျပါ။ WordPress dashboard ကလြာရငျ အဆငျ့ (၁) အောငျမွငျပါပီ။
အဆငျ့ (၂) – Email တှငျ Activate Blog လုပျရနျ
WordPress အကောငျ့ဖှငျ့ထားတဲ့ Email မှာ Activate Blog လုပျပေးရပါမယျ။ Gmail မှာ ကနြျောတို့ wordpress account ဖှငျ့ထားခဲ့တဲ့ Gmail Account ကိုသှားပီး WordPress ကပို့ထားတဲ့ Mail ကိုဝငျပါ၊ ပွီးပါကအောကျပါပုံအတိုငျး (Click here to Confirm Now) ကိုနှိပျပါ။
ကနြျောတို့ ဖနျတီးထားတဲ့ Website dashboard ကိုရောကျသှားပီး ညာဖကျထောငျ့မှာ (Email confirmed) ဆိုပီးပျေါလာပါမယျ။
အဆငျ့ (၃) – Blog ကိုပွငျဆငျရနျ
Dashboard မှာ အနီရောငျပွထားတဲ့ Name Your Site ကိုနှိပျပီး ကနြျောတို့ Website ရဲ့ နာမညျ၊အကွောငျးအရာ စတဲ့အခကျြအလကျတှကေို ဖွညျ့ရပါမယျ။
အသေးစိတျအခကျြအလကျမြား ဖွညျ့ပီးရငျ အောကျပါပုံအတိုငျး Save Setting ကိုနှိပျပီး Return to home ကိုနှိပျပါ။
အဆငျ့ (၄) – Theme ကိုရှေးခယျြပွီး Customize လုပျရနျ
ဒီအဆငျ့မှာတော့ ကနြျောတို့ website မှာသုံးမယျ့ Theme (Design) ကိုရှေးခယျြရပါမယျ။ Theme ကိုရှေးခယျြရနျ အောကျပါပုံမှာ မွှားပွထားတဲ့ Side bar က Appearance ကိုထောကျပီး Theme ကိုနှိပျပါ။
အခမဲ့ Free သုံးလို့ရတဲ့ Theme တှနေဲ့ ပိုကျဆံပေးသုံးရတဲ့ Premium Theme တှလေဲရှိပါတယျ။ မိတျဆှတေို့ ကွိုကျနှဈသကျတဲ့ Theme ကိုနှိပျပါ။ ပွီးပါက အောကျပါပုံအတိုငျး Activate this design ကိုနှိပျပါ၊ အခမဲ့ Theme ဆိုရငျ ဘေးမှာ Free ဆိုပီးပွပါတယျ။
ပွီးရငျတော့ Edit homepage ကိုနှိပျပီးတော့ ကနြျောတို့ Homepage ကိုလိုသလို ပွုပွငျလို့ရပါပီ။
Themes တှကေို လိုသလိုဘယျလိုပွုပွငျရမလဲ၊ customize ဘယျလိုလုပျရမလဲစတဲ့ သငျခနျးစာတှေ Youtube မှာ Tutorials တှရှေိပါတယျ။ လောလောဆယျ ကနြျောတို့ မပွငျဘဲ Launch ကိုနှိပျပီးဆကျသှားပါမယျ။
Domain ရှေးတဲ့နရော ပွနျပျေါလာခဲ့ရငျ ကနြျောတို့ free လုပျထားခဲ့တဲ့ Website name ကိုပဲရှေးပီး skip purchase နှိပျလိုကျပါ။ ပွီးရငျတော့ အပျေါမှာလုပျခဲ့တဲ့အတိုငျး အခမဲ့အသုံးပွုခငျြတာကွောငျ့ start withafree site ကိုထပျနှိပျပါ။
ပွီးရငျတော့ အောကျပါပုံအတိုငျး (No thanks, I’ll stick with yourdomain.wordpress.com) ကိုနှိပျပါ။
Step4Done….!
အဆငျ့ (၅) – Browser မှာ website အနအေထား ကိုရှိုးရနျ
Browser ကိုသှားပီး မိတျဆှတေို့ လုပျခဲ့တဲ့ Domain name (URL) အပွညျ့အစုံကိုရိုကျထညျ့ပါ။ မိတျဆှတေို့ ရှေးထားတဲ့ Theme အတိုငျးပျေါနပေီး Mobile၊ Tablet တို့မှာ ကွညျ့ရငျလဲ UI (Design) ကို responsive ဖွဈပီး ကွညျ့ရအဆငျပွအေောငျ wordpress ကပွုလုပျထားတာတှရေ့ပါမယျ။ Cool right..! ။ WordPress dashboard ထဲပွနျသှားခငျြရငျ (www.yourdomainname.wordpress.com/login) URL ကိုရိုကျထညျ့ Login ဝငျပီးအသုံးပွုနိုငျပါတယျ။ ကနြျောတို့ လုပျငနျးစဥျတဈခုလုံးကို setup လုပျတာ မိနဈပိုငျးပဲအခြိနျယူရပါတယျ။ ဒါကအစပဲရှိပါသေးတယျ။ Theme ရဲ့ Design တှေ Appearance တှကေိုပွောငျးခငျြရငျ dashboard ဘယျဘကျ sidebar ပျေါမှာရှိတဲ့ Appearance ကိုနှိပျပီး စိတျကွိုကျပွောငျးလဲနိုငျပါတယျ။ အသေးစိတျကို နောကျသငျခနျးစာမှာ ဆကျလကျပွောပွသှားပါမယျ။
ဒီသငျခနျးစာမပီးဆုံးခငျမှာ Dashboard မှာရှိတဲ့ Sidebar အခွခေံအကွောငျးအနညျးငယျပွောပွပါရစေ။
Dashboard : WordPress Plugins နှငျ့ Themes မြားအတှကျ
Posts : ပို့ဈမြားရေးခွငျး၊ ဖကျြခွငျးမြားစီမံရနျ
Media : ပုံမြား၊ ဗီဒီယိုမြား စီမံရနျ
Pages : Homepage, Blog Page စတဲ့ Page မြားစီမံရနျ
Comments : Blog (ဆောငျးပါး) တှငျရှိတဲ့ Comments (မှတျခကျြ) မြားစီမံရနျ
Appearance : ကနြျောတို့အစောပိုငျးက ဖျောပွခဲ့ပီးတဲ့အတိုငျး Themes မြားစီမံရနျ၊ Menu မြားစီမံရနျ၊ Customize ပွုလုပျရနျ
That’s all for it. အထကျပါအဆငျ့တှကေို လုပျဆောငျပီး လှယျကူစှာ Website တဈခုဖနျတီးနိုငျပါတယျ။ ဤလုပျငနျးစဥျနဲ့ ပတျသကျပီး မိတျဆှတေို့ မရှငျးတာရှိရငျ comment မှာမေးမွနျးနိုငျပီး ကွိုကျနှဈသကျတယျဆိုရငျ ပွနျလညျမြှဝပေေးဖို့ တောငျးဆိုခငျြပါတယျ။ မိတျဆှတေို့ မြှဝမှေသာ website တဈခုကိုဖနျတီးဖို့ အစပွုနသေူတှေ၊ဘယျကစရမှနျးမသိတဲ့သူတှေ ကိုယျတိုငျပွုလုပျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
အခကျအခဲမြားအတှကျ ကနြျောတို့ ကူညီဖို့ အသငျ့ရှိပါတယျ။
ကျနော်တို့ WordPress.com platform ပေါ်မှာအခမဲ့ website တစ်ခုကို ဘယ်လိုဖန်တီးတည်ဆောက်မလဲဆိုတာ တစ်ဆင့်ပီး တစ်ဆင့်ရှင်းပြသွားပါမယ်။
အဆင့် (၁) – WordPress.com မှာ WordPress အကောင့်ဖွင့်ရန်
ကို့မှာရှိတဲ့ Browser မှာ www.wordpress.com ဆို ပီးရိုက်ထည့်ပါ။ အောက်ပါပုံအတိုင်း ပေါ်လာတဲ့အခါမှာ မြှားပြထားတဲ့ Get Started ကိုနှိပ်လိုက်ရန် Sing up form ကျလာပါမယ်။
Form ထဲမှာ Email Address(အီးမေးလ်လိပ်စာ)၊ Username(အမည်)၊ Password(လျှို့ဝှက်ကုဒ်) ဖြည့်ပါ။ အချက်အားလုံးဖြည့်ပီးသွားရင် Create your account ကိုနှိပ်ပါ။
Domain ထည့်ရန် Form တစ်ခုကျလာပါမယ်။ အဲ့ထဲမှာ ကိုပြုလုပ်မယ့် Domain name (Website နာမည်)ထည့်ရပါမယ်။
ဥပမာ – www.yourdoamin.com (yourd‌omain နေရာမှာကြိုက်နှစ်သက်ရာ နာမည်ထည့်ပါ)
ဤနေရာမှာ ကျနော်တို့ သိထားသင့်တာတစ်ခုရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့က အခမဲ့ Website ဖန်တီးရန် WordPress ကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကျနော်တို့ရွေးချယ်တဲ့ Domain name အနောက်မှာ wordpress.com ဆိုပီးပေါ်နေမှာပါ။
ရွေးချယ်ပီးပါက အောက်ပါပုံအတိုင်း Free စာတန်းပါတဲ့ Select ကိုနှိပ်ပါ။
ကျနော်တို့က အခမဲ့သုံးချင်တာကြောင့် Start withafree ကိုနှိပ်ပါ။ အဆင့် (၁) အောင်မြင်သွားပါပီ။
အဆင့် (၂) – Email တွင် Activate Blog လုပ်ရန်
WordPress အကောင့်ဖွင့်ထားတဲ့ Email မှာ Activate Blog လုပ်ပေးရပါမယ်။ gmail.com မှာ ကျနော်တို့ဖွင့်ထားတဲ့ Account ကိုသွားပီး WordPress ကပို့ထားတဲ့ Mail ကိုဝင်ပီး အောက်ပါပုံအတိုင်း (Click here to Confirm Now) ကိုနှိပ်ပါ။
ကျနော်တို့ ဖန်တီးထားတဲ့ Website dashboard ကိုရောက်သွားပီး ညာဖက်ထောင့်မှာ (Email confirmed) ဆိုပီးပေါ်လာပါမယ်။
အဆင့် (၃) – Blog ကိုပြင်ဆင်ရန်
Dashboard မှာ အနီရောင်နဲ့ပြထားတဲ့ Name Your Site ကိုနှိပ်ပီး ကျနော်တို့ Website ရဲ့ ခေါင်းစဉ်။အကြောင်းအရာ စတဲ့အချက်အလက်တွေကို ဖြည့်ရပါမယ်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ဖြည့်ပီးရင် အောက်ပါပုံအတိုင်း Save Setting ကိုနှိပ်ပီး Return to home ကိုနှိပ်ပါ။
အဆင့် (၄) – Theme ကိုရွေးချယ်ပြီး Customize လုပ်ရန်
ဒီအဆင့်မှာတော့ ကျနော်တို့ website မှာသုံးမယ့် Theme (Design) ကိုရွေးချယ်ရပါမယ်။ Theme ကိုရွေးချယ်ရန် အောက်ပါပုံတွင် မြှားပြထားတဲ့ Side bar က Appearance ကိုထောက်ပီး Theme ကိုနှိပ်ပါ။
အခမဲ့ Free သုံးလို့ရတဲ့ Theme တွေနဲ့ ပိုက်ဆံပေးသုံးရတဲ့ Premium Theme တွေလဲရှိပါတယ်။ မိတ်ဆွေတို့ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ Theme ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးပါက အောက်ပါပုံအတိုင်း Activate this design ကိုနှိပ်ပါ၊ အခမဲ့ Theme ဆိုရင် ဘေးမှာ Free ဆိုပီးပြပါတယ်။
ပြီးရင်တော့ Edit homepage ကိုနှိပ်ပီးတော့ ကျနော်တို့ Website homepage ကိုလိုသလို ပြုပြင်လို့ရပါပီ။
မိတ်ဆွေတို့ Homepage ကိုလိုသလို ပြုပြင်ပီးရင် Launch ကိုနှိပ်ပါ။ Domain ရွေးတဲ့နေရာ ပြန်ပေါ်လာခဲ့ရင် ကျနော်တို့ free လုပ်ထားခဲ့တဲ့ Website name ကိုပဲရွေးပီး skip purchase နှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးနောက် start withafree site ကိုထပ်နှိပ်ပါ။
ပြီးရင်တော့ အောက်ပါပုံအတိုင်း (No thanks, I’ll stick with yourdomain.wordpress.com) ကိုနှိပ်ပါ။
အဆင့် (၅) – Browser မှာ website အနေအထား ကိုရှိုးရန်
Browser ကိုသွားပီး မိတ်ဆွေတို့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ Domain name (URL) အပြည့်အစုံကိုရိုက်ထည့်ပါ။ မိတ်ဆွေတို့ပြုပြင်ထားတို့ အတိုင်းပေါ်မပေါ်ကြည့်ပါ။ Mobile၊ Tablet တို့မှာ ကြည့်ရင်လဲ UI (Design) ကို responsive ဖြစ်ပီး ကြည့်ရအဆင်ပြေအောင် wordpress ကပြုလုပ်ထားတာတွေ့ရပါမယ်။ Cool right..! ။ WordPress dashboard ထဲပြန်သွားချင်ရင် (www.yourdomainname.wordpress.com/login) URL ကိုရိုက်ထည့် Login ဝင်ပီးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကို setup လုပ်တာ မိနစ်ပိုင်းပဲအချိန်ယူရပါတယ်။ ဒါကအစပဲရှိပါသေးတယ်။ Website ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိစေရန် Design တွေ Appearance ကိုပြောင်းလဲဖို့ dashboard ဘယ်ဘက် sidebar ပေါ်မှာရှိတဲ့ Appearance ကိုနှိပ်ပီး စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို နောက်သင်ခန်းစာမှာ ဆက်လက်ပြောပြသွားပါမယ်။
ဒီသင်ခန်းစာမပီးဆုံးခင်မှာ Dashboard မှာရှိတဲ့ Sidebar အခြေခံအကြောင်းအနည်းငယ်ပြောပြပါရစေ။
Dashboard : WordPress Plugins နှင့် Themes များအတွက်
Posts : ပို့စ်များရေးခြင်း၊ ဖျက်ခြင်းများစီမံရန်
Media : ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများ စီမံရန်
Pages : Homepage, Blog Page စတဲ့ Pages များစီမံရန်
Comments : Blog (ဆောင်းပါး) တွင်ရှိတဲ့ Comments (မှတ်ချက်) များစီမံရန်
Appearance : ကျနော်တို့အစောပိုင်းက ဖော်ပြခဲ့ပီးတဲ့အတိုင်း Themes များစီမံရန်၊ Menu များစီမံရန်၊ Customize ပြုလုပ်ရန်
That’s all for it. အထက်ပါအဆင့်တွေကို လုပ်ဆောင်ပီး လွယ်ကူစွာ Website တစ်ခုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပီး မိတ်ဆွေတို့ မရှင်းတာရှိရင် comment မှာမေးမြန်းနိုင်ပါပီး ကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် ပြန်လည်မျှဝေပေးဖို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ မိတ်တွေတို့ မျှဝေမှသာ website တစ်ခုဖန်တီးဖို့ အစပြုနေသူတွေ၊ဘယ်ကစရမှန်းမသိတဲ့သူတွေ သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေတို့ အခက်အခဲများအတွက် ကျနော်တို့ ကူညီဖို့ အသင့်ရှိပါတယ်။